राहत बाँड्न जाँदै हुनुहुन्छ? केही पोषिलो खानेकुरा र सेनिटरी प्याड पनि लैजानुस् है! |
प्रकाशित मिति :2015-05-05 10:43:46
धादिङ सदरमुकाम पुग्नुअघि ससा गाउँका बासिन्दा गाडीमा ‘राहत वितरण’ लेखिएको व्यानर देखेपछि अगाडि आएर उभिए। गाडी रोकेपछि एक अधवैंशे महिलाले भनिन्, ‘सदरमुकाम नजिक भएपनि राहत पाएनौं, हामीलाई त्रिपाल दिनुहोस्।’
राहत वितरणको लागि एकद्वार प्रणाली अपनाइएको खबर पाएपछि हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाँदै थियौं। प्रशासनले कहाँ राहतको आवश्यकता पहिचान गर्छ त्यही पुग्ने निर्णय थियो क्लबको। तर, ति महिलाले भनिन्, ‘हजुर प्रशासनमा पुगेपछि हामीकहाँ राहत फर्केर आउँदैन।’ हामीसँग त्रिपाल थिएन। नारायणगढ बजारमा किन्न नपाएपछि त्रिपालको सट्टा ५० थान कम्बल किनेका थियौं।
हामीले त्रिपाल नभएको जानकारी दिएपछि उनीहरूले राहत माग्न जोड गरेनन्। हामी हिँड्न के खोजेका थियौं काखमा १ महिनाको शिशु च्यापेर एकजना सुत्केरी आईन्। ‘त्रिपालमुनी चिसोमा गतिलो ओढ्ने छैन।’ निर्मला पौडेल छोरा जन्माएको एक महिनापछि सुत्केरी खान माइती आएकी रहिछन्।
माइतीमा पोषिलो गाईको दुध पिउँदा आमा छोरा दुबैलाई तागत मिल्छ भनेर आएकी थिईन्। तर वैशाख १२ मा गोरखाको बारपाक केन्द्र भएर गएको भुकम्पले धादिङको ससालाई पनि छोडेन। निर्मलाको माइतीघर पनि ध्वस्त बनायो। दुहुनो गाई थियो, भुकम्पले गोठ भत्किँदा पूरिएर मर्यो।
ढुङ्गामाटोबाट बनेको घर गर्ल्याम गुर्लुम ढले। बाहिर घाम तापेर बसेकोले निर्मलाको आमा छोराको ज्यान जोगियो। तर, माइतीमा खानेकुरा छैन। सदरमुकामसँगै जोडिएको छ ससा गाउँ। धादिङकै विकट गाउँका लागि छिन्छिन्मा ट्रकका ट्रक राहत सदरमुकामतर्फ हुईंकिन्छ। तर, ससा गाउँलाई फर्केर हेर्दैनन् राहत टोलीले।
हुन त गाउँका पीडितले त्रिपाल पाएका छन्। उनीहरूको घरघरमा धान पनि छ। केहीले धान निकाल्न पनि भ्याए। तर, धान कुट्न मिल चलेको छैन। ‘धान कुट्न नपाएपछि कसरी भात पकाउनु?’ निर्मलाकी आमा दिलमाया कोइरालाले भनिन्, ‘माइतीमा मिठो खुवाएर सुत्केरी छोरीलाई बलियो बनाउँछु भन्ने थियो, दैवले यस्तो बिजोग बनाइदियो।’
बस्ने घर नै नभएपछि निर्मलासहित उनको माइतीघरका सबै त्रिपालमुनी टहरामा रात बिताइरहेका छन्। सुत्केरी निर्मलालाई चिसोका कारण शरिरमा समस्या पनि हुन थालेको छ। तरपनि त्रिपालमुनी बस्नुको बिकल्प छैन। ‘घरको पनि हालत उस्तै छ, यहि चिसो सहेरै बस्नुपर्यो।’ निर्मलाले भनिन्, ‘पोषिलो खानेकुरा नभएर होला बच्चालाई पुग्ने दुध आउन पनि छोडिसक्यो।’
भूकम्पको त्रास र भागदौडले होला, उनको रगत पनि बगिरहेको रहेछ। तर, साथमा प्याड थिएन। केही थोत्रा कपडा च्यातेर प्याड बनाएकी रहिछन्। फोहोर कपडा प्रयोग गर्दा संक्रमणको जोखिम भएपनि थोत्रा कपडा नै प्रयोग गर्नुको विकल्प थिएन निर्मलासँग।
हामीले उनलाई एउटा कम्बल र नयाँ तन्ना निकालेर दियौं। त्यति पाउँदा पनि निर्मलाको मुहार हँसिलो भएको थियो। त्रिपालमूनी भएपनि आमा छोरालाई न्यानो हुने भयो। एक थान कम्बलले उनलाई दिएको खुसीमा मेरो मन भने अमिलो भयो।
हुन त विपत्तीमा विशेष अवस्थाका व्यक्तिलाई छुट्टै ध्यान दिन मुस्किल पक्कै हुन्छ। भूकम्प पीडितलाई सहयोगकै लागि सरकार, विभिन्न संघ संस्थाले राहत गाउँ गाउँमा बाँडेका पनि छन्। तर, महिलाका विशेष अवस्थातर्फ भने ध्यान पुगेको देखिएन।
महिलाले आफ्नो जीवनकालमा विशेष अवस्थाका बारेमा सबै जानकार नै हुन्छन्। विशेष गरी सुत्केरी, गर्भवती, महिनावारीका समय महिलाका विशेष अवस्था हुन्। हामीले राहत बाँड्ने अभियान चलाउँदा चामल, त्रिपाल, कम्बललगायत प्राथमिकतामा पर्ने र अत्यावश्यक कुराहरूको संकलन त गर्छौं नै।
त्यससँगै आफू जाने स्थानमा हुनसक्ने विशेष गरी गर्भवती र सुत्केरी महिलाका लागि केही पोषिलो खानेकुरा, उनीहरूको लागि चाहिने अत्यावश्यक कपडा, सुत्केरी र महिनावारी भएका महिलालाई चाहिने सेनिटरी प्याडलगायतका सामग्री पनि संकलन गरौं। परिमाण कम नै होस् यि सामग्रीले समस्यामा रहेका महिलाको विशेष अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्छ।